कथा : पुनमाया भाउजु र भाउजुको आठ तल्ले घर - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : देश मृत्यु शैयामा छ
कविता : जय होस →
कती पटक पढियो : 1,539
पुनमाया भाउजुको घर पुगेपछि मैले एकपटक उसको घरमा दृष्टि पु¥याएँ । आठ तल्ले यो घर हेर्न करिव करिब मैले टाउको उठाउनु प¥यो, घाँटी तन्काउनु प¥यो । मैले टाउको उठाएर हेरें । घाँटी तन्काएर हेरें ।
यो घर करिब पचहत्तर फुट अग्लो छ । आकाश माथि उठिरहेको यो घर हेर्दै मैले कलबेल थिचें । कसैले हेरेन । फेरि कलबेल थिचें । धेरै बेरपछि सात तल्लाको झ्यालमा पुनमाया भाउजु देखा परी । मैले ‘ढोका खोल्नु आउनुस्’ भनें । उसले हात हल्लाएर ल्याई । के भनेको हो मैले बुझिन । मैले फेरि हातको इशाराले ‘ढोका खोल्न आउनुस्’ भनें । ऊ भित्र पसी । ढोका खोल्न आउँदैछ भन्ने ठानेर म ढोकामा भाउजुलाई पर्खेर उभिरहें । धेरैबेरसम्म कसैले पनि ढोका खोल्न आएन । सुनेको थिएँ, भाउजुलाई अचेल सञ्चो छैन । खुटृा दुख्छ । त्यति हिंड्डुल गर्न सक्नु हुन्न । यसैले म पुनः ढोकामा आँखा गाडेर ढोका खुल्ने प्रतिक्षामा बसिरहें । तर धेरैबेर सम्म कसैले झ्याल खोल्न नआएपछि मैले फेरि घर माथि हेरें । भाउजु झ्यालमै बसिराखेकी रहिछ । मैले फेरि ढोका खोल्न आउनुस् भन्ने भावले इशारा गरें । उसले पनि झ्यालमै बसेर हातको इशाराले केही भनि । तर मैले केही बुझेको होइन । के भन्नु भएको हो भन्ने भावले मैले पनि हात चलाएँ । भाउजुले हात तल झारेर के के संकेत गरिरही । तर मैले पटक्कै केही बुझेको होइन । उसको मुख चलिरहेको छ तर मैले केही सुनेको होइन । मैले पनि हातको इशारासंगै मुख पनि चलाइराखेको छु तर भाउजुले सुन्नु भयो कि भएन मैले बुझ्न सकेको छैन । उसले हातले संकेत गरिरही । मैले हेरिरहें र घरिघरि खै मैले त केही पनि बुझिन भावले मैले पनि हात चलाइरहें । संकेतको प्रक्रिया यसरी नै चलिरहेकै बेला एकजना मान्छे म सामु ठिङ्ग उभिन आइपुग्यो र उसले डोरीमा झुण्डिरहेको साँचो मेरो हातमा ठम्याउँदै भन्यो – “सांचो खोलेर जानुस्” ।
सांचो लिएर मैले एकपटक फेरि सात तल्लाको झ्यालबाट हेरिरहेकी भाउजुलाई हेरें । भाउजु मुसुमुसु हाँसिरहेकी थिई । म पनि सात तल्लाको झ्यालदेखि झुण्डिरहेको सांचो र भाउजुलाई पालैपालो हेरेर फिस्स हाँसें । अनि घर भित्र छिरें ।
र आठतल्ले घरको भ¥याङ्ग चढ्न थालें । दुई तल्ला माथि पुग्दा नै मेरो खुट्टा गलिसकेका थिए । म थकित भैसकेको थिएँ । अझ चार तल्ला माथि पुग्नु पर्छ । जान सक्ने पो हो कि होइन ? मलाई खुट्टा दुख्ने रोग छ । उकालो चढ्न गा¥हो लाग्छ । भ¥याङ्ग चढ्न सक्दिन । खुट्टा फत्रक्कै गल्छ । स्वाँ स्वाँ फुँ फुँ आउँछ । उकालो वा भ¥याङ्ग चढ्यो कि घुँडा, तिघ्रा दुखेर आउँछ । यसैले आजभोलि बिहान बिहान स्वयम्भू डुल्न जाँदा समेत म माथि जाने गर्दिन । हारतिमाताको दर्शन गर्न जाँदिन । बस् स्वयम्भू परिक्रमा गरेर घर फर्कने गर्छु ।
भाउजु म भन्दा जेठी । उसले यो घरमा कसरी तलमाथि गरिरहेकी होलिन् ? पुरानो मानिस बलिया हुन्छन् भन्थे । साँच्ची, भाउजु पनि बलिया नै रहिछन् । यसरी विचारिंदै म एकक्षण तेश्रो तल्लामा सुस्ताएँ ।
पहिले त यो घर चार तल्ला मात्रै थियो । कहिले तल्ला थपेछ ? दुई वर्ष अगाडि बिहाको निमन्त्रणा कार्ड दिन आउँदा समेत यो घर चार तल्लाकै थियो । तल्ला थपेको कुरा पनि थाहा थिएन । थाहा पाएको भए त आउने नै थिइनँ । जसलाई भएपनि पठाउने थिएँ । अझ दशवर्ष अगाडि पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन लागेको भन्दा मैले भनेको थिएँ –“नयाँ घर किन बनाउने हतार गरेको भाउजु ? घर बलियै छ । केही भएको पनि छैन । बेकारमा भएको घरलाई किन भत्काउने ? कोही भएको पनि होइन ? छोरीहरुको व्यवहार सकिहाल्यो क्या रे ! भएको एउटा छोरा पनि विदेशमा गइ हाल्यो । अब कसको लागि बनाउने ?”
मेरो कुरो सुनेर भाउजुले भन्नु भएको कुरा अहिले पनि मलाई सम्झना छ – “हो बाबु, मैले पनि पर्दैन भनेको थिएँ । तर छोरो मानेकै होइन । नयाँ घर बनाएर पसल कवल निकाल्ने रे । बहाल भएपनि आउँछ भन्यो । आमालाई चाहिने खर्च यही घरबाट पु¥याउँछ भन्यो । छोरोले भनेपछि मैले पनि नाइँ भन्न सकिन ।”
कुरा आयो, गयो, सक्यो । पुनमाया तताजुले पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनायो । अनि घरको पसल कवल देखेपछि मलाई पनि लागेको थियो – “भाउजुलाई राम्रै भयो । आवश्यक खर्च यसैबाट तर्ने भयो । आफ्नो पनि मूल बाटोमै घर भएको भए यसरी नै पसल कवल निकाल्न मिल्थ्यो । बहालमा दिन पाइन्थ्यो । केही पैसाको जोहो त हुन्थ्यो । आफ्नो त घरै पनि भित्र चोकमा प¥यो ।
यसरी भ¥याङ्गको सिंढिमा बसेर मनमा कुरा खेलाइरहेको थिएँ, कलबेलको आवाजले झसङ्ग भएँ । तल फेरि कसैले कलबेल बजाएको जस्तो लाग्यो । मैले झ्यालबाट चियाएर हेरें । नचिन्ने मान्छे रहेछ । तत्कालै मैले आफ्नो टाउको झ्याल भित्र ल्याएँ । त्यो मानिसले मलाई देख्यो वा देखेन म भन्न सक्दिन । र म फेरि भाउजुको आठ तल्ले घरकोे तेश्रो तल्लाको सिंढि चढ्न थालें ।
चौथौ तल्लाको भ¥याङ्ग उक्लिसकेपछि मलाई सास् फेर्न समेत गा¥हो भएर आयो । खुट्टा फत्रक्क गलेर हिंड्नै नसक्ने भयो । मलाई उत्निखेरै पाँच तल्ले सिंढि उक्लने आँट आएन । म फेरि पाँच तल्लाको सिंढिमा बसेर आराम लिन पुगें ।
म विचार्न थालें ।
– मानिसलाई किन यत्रो बडेमानको घर बनाउन पर्ने होला ? जता हेरे पनि ठूलठूला घरहरु बनिदै छन् । तल्लाहरु थपिंदै छन् । भ¥याङ्ग उक्लिन समेत यति गा¥हो हुने गरी मान्छेलाई किन यति अग्लो घर बनाउनु पर्ने होला ! कि त लिफ्ट राख्न सक्नु पर्छ । फेरि लिफ्ट राखेको भए त प्रायःजसो अग्ला घरहरु केवल लिफ्टको लागि मात्र हुन जान्थ्यो होला । कोथाहर त फुस्सा ! भाउजुको घर जम्मा एक नालेको छ ।
– अँ, साँच्ची ! भाउजुले यो घरमा कसरी तलमाथि गरिराख्नु भएको होला ? म साठी वर्षको मान्छेलाई त यस्तो गा¥हो छ भने, भाउजु त सत्तरी नाघिसक्यो होला ।
भाउजु अझै दुई तल्ला माथि बस्थी । मलाई माथि नगइकन फर्कन मन लाग्यो । तर म भाउजुलाई आफ्नो छोरोको विवाहको निम्तो कार्ड दिन आएको मान्छे । नभेटिकन फर्कनु पनि भएन । फोनमा मात्र पनि भन्न नमिल्ने । आफ्नै परिवार खलक । कार्ड पनि कसैलाई दिएर पठाउन नहुने । आफै आउनु पर्ने । नत्र ब्याः (मर्दापर्दाको सम्बन्ध) नै टुट्न सक्थ्यो । फेरि यहाँसम्म आइसकेपछि, भाउजुले देखिसकेपछि फर्कने कुरो पनि भएन ।
स्वाँ–स्वाँ, फुँ,फुँ गर्दै सकी नसकी म भ¥याङ्ग चढ्दै गएँ । सात तल्लाको चेन गेट पछाडि बसिरहेकी भाउजुलाई देखिसकेपछि मात्र मेरो मन केही हलुङ्गो भयो । मैले आरामको सास फेरें । यद्यपि मेरो मुखबाट फुट्कि हाल्यो – “यो त भएन है भाउजु !”
अनायसै मेरो मुखबाट निस्केको वाक्यले भाउजुको अनुहारमा आश्चर्यको भाव देखा परी र सोधी – “किन के भएन बाबु ?”
– “यही नि । माथि आउन समेत यस्तो गा¥हो । प्राणै जाला जस्तो ।”
मेरो कुरा सुनेर भाउजु एकक्षण मुसुक्क हाँसी र भनी – “जाँदैन बाबु, जाँदैन । काल नआई प्राण कहाँको जानु ?”
कुरा गर्दै मलाई भाउजुले कोठामा लग्यो । म कोठामा रहेको सोफामा थचक्क बसें । थकाई मारें । संगैको करुवा लिएर पानी पिएँ ।
बल्ल मेरो सास माथि सास आए जस्तो भयो ।
– “सत्ते भाउजु, मलाई त यो घर माथि आउन पनि असाध्यै मुश्किन भयो । भाउजुले कसरी मात्र तल माथि गरिराख्नु भएको होला !”
– “मलाई त तलमाथि गर्नै पर्दैन बाबु । कसरी गा¥हो हुन्छ ?”
– “के भन्नु भएको भाउजु ? बाहिर कत्तै जानु पर्दैन र ! पसलससल पनि जानु पर्दैन ?”
– “अहँ ।”
आश्चर्यको पालो मेरो थियो । मैले भाउजुको अनुहारमा एकचोटि गहिरिएर हेरें र फेरि जोड दिएर सोधें –
– “अनि खानको लागि सरसामान पनि किन्न जानु पर्दैन र भन्या ? कि छोरा विदेशबाट फर्किसके । कि छोरीहरु यहीं छन् ।”
– “अहँ । छोरा फर्केको पनि होइन । छोरीहरु बस्न आएकी पनि होइनन् । छोरा, छोरी नभए पनि पसलेहरु, छिमेकीहरु छन् नि बाबु !”
– “त्यसो भए भाउजुलाई आवश्यक पर्ने सबै कामहरु पसले, छिमेकीहरुले गर्दिनु हुन्छ ।”
– “हो बाबु ।” भाउजुले यति भनेर मोबाइलको स्वीच अन गरी । अनि मोबाइलमा कुरा गर्न थाली – “बाबु सुरेश मलाई दुध दुइटा, फूल पाँचोटा, पाउरोटी एउटा पठाइ दिनु है ।” यति भनेर भाउजुले मोबाइल बन्द गरी र कोठामा रहेको एउटा झोला डोरीमा बांधेर झ्यालबाट बाहिर पठाई । मैले भाउजुको क्रियाकलाप हेरिरहें । एकक्षण पछि भाउजुले डोरी तान्यो । साच्चै, झोलामा भाउजुले अर्डर गरे जस्तै झोलामा दुध, फुल, पाउरोटी थिए ।
– “म माथि गएर च्या पकाएर आउँछु, तिमी वस्दै गर्नु ।”
मैले भाउजुलाई केही भन्न नपाउँदै भाउजु माथि जान उठी । मैले भाउजुले हेरें । भाउजु मुसुमुसु हाँस्दै माथि गई ।
केही बेरपछि भाउजु च्या, फुल लिएर तल आई । मलाई च्या र फुल दिंदै भनी – “बाबु च्या खाऊ ।”
मैले कप उठाएँ तर मेरो आँखा भने भाउजुको अनुहारमा अल्झिरहेको थियो । मैले हेरिरहेको देखेर भाउजुले फेरि भनी – “बाबु च्या खाऊ ।”
– “छोरा, छोरीको खबर के छ नि भाउजु ?”
– “सबैको ठीकै छ । टाय्म टाय्ममा फोन गरेर ल्याउँछन् ।”
– “अनि भाउजुका छोरीहरु त आइराख्छन् ।”
– “उनीहरु नआएको पनि धेरै भयो । के गर्नु, उनीहरु पनि काममा जानु पर्छ । तर उनीहरुले पनि कहिलेकाहीं फोन गरेर ल्याउँछ ।”
– “भाउजु अचेल मन्दिरसन्दिर पनि जानु हुन्न कि !”
– “अँ … । अचेल कतै गइँंदैन । पहिला जस्तो हिंडडुृल गर्न सकिंदैन । यसैले प्रायशः घरमै बसिराख्छु । अनि बाबु, के कति कामले आएको … ?”
– “अँ, आउने २० गते सुनिलको विवाह भएकोले भाउजुलाई कार्ड दिन आएको ।” यति भनेर मैले भाउजुको हातमा तीनवटा कार्ड राखिदिएँ । भाउजुले कार्ड एकचोटी हेरी ।
– “तीनता कार्ड क–कस्को नि !”
– “छोरीहरुको पनि भाउजु कहाँ नै छोडेर जान्छु भनेर ।”
– “हुन्छ नि त बाबु, म फोन गरेर पठाउँछु । … बाबु आजभोलि मलाई हिंड्डुल गर्न अलि सकसै छ । कहीं पनि आउने जाने गरेको छैन । तर बाबुकहाँ एकचोटी भएपनि आउँछु ।”
– “भाउजुलाई लिन आउँछु नि !”
– “पर्दैन बाबु पर्दैन । म नै आउँछु ।”
भाउजुसंग विदावारी लिएर म कोठाबाट बाहिए आएँ । तल ओर्लें । भ¥याङ्ग ओर्लिरहेको म, मेरो मनमा धेरै कुराहरु खेल्न थाले । यो आकाश छुन खोजिरहेको घरले मेरी भाउजुको अनुहार उज्यालिएको छ त ? आकाश त आकाशै हो । अन्तरिक्ष, अनन्त । यसको व्याप्ती असीमित छ । अपरिमित छ । जतिसुकै कोशीस गरे पनि यसलाई छुन सक्ने होइन ।
मूल ढोकाबाटा बाहिर आएपछि मैले फेरि एकपटक भाउजुको आठ तल्ले घर टाउको उठाएर हेरें । पुनमाया भाउजु साततल्लाको झ्यालमा बसेर तल हेरिरहेकी थिई । पहिलेपहिले भए तलसम्म आएर “फेरि फेरि आउँदै गर्नु है बाबु” भन्ने भाउजु आज तल आएन । सायद भाउजुको संसार आज असीमित परिधि भित्रको एउटा कोठामा सीमित भइसकेकोछ । एउटा सुत्ने कोठा र एउटा भान्छा कोठामा सीमित भइसकेको छ । भाउजुलाई मैले घाँटी तन्काएर हेरिरहन सकिन । मलाई आफ्नै घांटी दुखे जस्तो भएर आयो । मैले जमीनमा हेरें । मेरो मनमा कुरा खेल्यो – घरसम्म पुग्ने बाटो त यही जमिन हो । अनि कतै बाँगो, कतै सरल रेखा चित्र जस्तो भएर बगिरहेको बाटो हेरें, जहाँ मान्छेहरुको भीड छ, चहलपहल छ । कोलाहल छन् । मोटर, मोटरसाइकलका ट्वाँय्टीं सुनिन्छन् । मलाई लाग्यो, जीवन त यही हो । जीवन त यहींबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
म भाउजुलाई सम्झिंदै, भाउजुको आठ तल्ले घरलाई सम्झिंदै र मनमा अनेक कुराहरु खेलाउँदै आफ्नो घर फर्किरहें ।
(स्रोत : फेसबुकको ‘कथा’ समूहबाट )
विधा : नेपाली कथा | हरिकृष्ण डंगोल - Hari Krishna Dangol. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।